တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ် ( လောက်ကိုင်)နားမှ ဒုတိယမဟာတံတိုင်းကြီး ကာရံရခြင်း ၏ နောက်ကွယ်မှ အဖြေသည် Mystery ဆန်လွန်းသော လျှို့ဝှက်သဲဖို ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေ - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | January 11, 2021 | knowledge | No Comments
(လက်ရှိ အကြောင်းပြချက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရန်)
လက်ရှိ ကာရံနေတဲ့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် တံတိုင်းကြီး ကာရံပြီးဆုံးမယ့် အချိ န်ဟာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ အပြီးသတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ပဟေဠိ ဆန်ဆန် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလို့ အကြောင်းပြပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ ထူး
ဆန်း အံဩ ဖွယ်ရာ ရင်သိမ့်တုန် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဇာတ်လမ်းကြီးက. ကပ်ပါလာပါတယ်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေ ၊ ဗို့အားမြင့် လျှပ်စစ်သံဆူးကြိုးတွေ ၊ လုံခြုံရေး Camera တွေ ၊ အချ က်ပေး ဥဩသံ တွေ အပြည့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဒီ နယ်စပ်စည်းရိုးကြီးဟာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေဖြစ်နေလို့ Asia Review မှာ ပင်တိုင် ဆောင်းပါးရှင် ဘာတီးလင့်တနာ က ရေး
သားဖော်ပြထားတာရော လက်ရှိ မြန်မာပြည်ကို အကြံ သမားတွေ ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပါ။
အားလုံးသိရအောင် ဖော်ထုတ်ရေးသား လိုက်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၄. ဒီဇင်ဘာလ မှာ #Toutiao လို့အမည်ရတဲ့ တရုတ် Websites တခု ကိုလူငယ်တစုက အဆို အက ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံ တံဆိပ်ကပ်ပြီး တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်က တရုတ်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး Website ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Website မှာရေးသားထားတဲ့ သတင်းတပုဒ်ဟာ ရေးသားသူ အမည်မပါရှိဘဲ တက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ ” အင်္ဂလိပ် စကားပြောပြီး ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက ကချင်ပြည်နယ် ဆိုတာ အမေရိကန် ကိုလိုလားသူ ဖြစ်တယ် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရေးသားထားပါတယ်”။
ဆက်ပြီးရေးထားတာက ကချင်သူပုန်တွေ အမြဲ ဖုံးကွယ်ထားတာ ပြည်ထောင်စုကခွဲထွက်ပြီး လွတ်လပ်ရေး ရယူဖို့ကြိုး စားနေသူတွေလို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ အကြံကြီးလဲဆိုရင် တရုတ်ပြည် ယူနန်နယ်ထဲက ဂျိန်းဖော တွေ လဲ အတူတူဘဲ ၊ ယူနန်ကနေ ခွဲထွက် လွတ်လပ်ရေးယူနိုင်ငံထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ယူနန် ဂျိမ်းဖော တွေဟာ အခုအခါ တပ်သားသစ်တွေ လျှို့ဝှက် ခေါ်ယူစုဆောင်းနေပြီလို့ ရေးထားပါတယ်။ ကချင်ဟာ တရုတ် အပေါ်ဟန်ပြ ဆက်ဆံရေးထား
ပြီး အတွင်းက ကြိတ်ကြံနေတာ ငါတို့သိရပြီ လို့ရေးသားပါတယ်။ လက်ရှိ ထိုင်း နိုင်ငံမှာ CIA ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ကချ င်အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ဖွင့်ထားတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ် ၊ ၂၀၁၄ ခု နှစ် ဧပြီလ မှာ KIA ခေါင်းဆောင် ဒု ဦးစီးချုပ် ဂွမ်မော် အမေရိက ကိုလာပြီး အမေရိကန်နဲ့ တွေ့ဆုံကာ ရေရှည် plan တွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့လဲ ရေးသားထားပါတယ်။
KIA ဟာ ဗာတီကန် နဲ့လဲအဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူး။ ဒို့တရုတ်ကို အကြီးအကျယ် လှ ည့် စားနေတယ် ၊ ကချင်တွေ ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်နိုင်အောင် အမေရိက က အပြည့်အဝကူညီ လိမ့်မယ်၊ နိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးတာနဲ့ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းကို အမေရိကန်တွေ စစ်အခြေစိုက်စခန်း လာဆောက်လိမ့်မယ် ၊ ဒို့တွေ ကြို တင်ကာကွယ်ရမယ် လို့ရေးသားဖော်ပြအပြီးမှာ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် တံတိုင်းစည်းရိုးကြီး စတင်ခဲ့တာပါဘဲ ၊ ဤ. Toutiao Website ပေါ်က ရေးသားဖော်ပြမှု ဟာ ဘယ်လောက်မှန်ကန်မှု ရှိလဲ ဆိုတာ လက်တွေ့ အဖြေက စည်းရိုးကြီးပေါ်လာပါပြီ။
တည်ဆောက်နေပြီ ၊ အခိုင်အမာခွေးတကောင် ကြောင်တမြီး ဝင်မရအောင် ခေတ်မီ လုံခြုံ ရေးစနစ်တွေ အသုံးပြုတည်ဆောက်နေတယ် ၊ ရလဒ်က အင်အားကျိတ်စု နေတဲ့ ကချင် သူပုန် KIA/KIO ဟာသိပ်မဝေးတဲ့ကာလ ( လူသူလက်နက်အင်အား အပြည့်အစုံ ရှိသည်နှင့်) မြန်မာ ပြည်ထောင်စုထဲ က ခွဲထွက်ပြီး ” ဝမ်ပေါင် သမ္မတနိုင်ငံတော်”
တည်မယ် ဆိုတာ ကျိန်းသေပြီ ဆိုတဲ့သဘော၊ ဒါကြောင့် ဝ နဲ့ TNLA MNDAA တို့သုံးဖွဲ့ကို တန်ပြန် အဖြစ် KIA ကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတယ် ၊ လက်ရှိမှာ KIA ကလဲ သိသိသာကြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် အဖွဲ့ထဲ မှာ မပါခြင်သလို လုပ်နေတာတွေ ရှိတယ် ၊ လက်နက်စက်ရုံတွေ KIA မှာ တည်ပြီးတာလဲ အမှန် ၊ တရုတ်ကို ပြန် ဘတ် ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ KIAကို တရုတ်က မျ က်စေ့အောက်ကအပျောက်မခံ တော့ဘူး။
ရခိုင်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းတွေထားဝယ် မုတ္တမ ဆိပ်ကမ်းတွေ ကိုကိုးကျွန်း တွေ ဟာ လက်တွေ့မှာ အမေရိကန် စစ်အခြေစိုက် စခန်း ထားဖို့ စိတ်ကူးယဉ် လို့ဘဲ ရနိုင်မယ်ဆိုတာ အမေရိကန် သိတယ် ၊ ခွန်ဆာ ရဲ့မော်ထိုင်း အာမီ ဟိုမိန်း မှာ ကောင်းစားစဉ်ကအမေရိကန်က ခွန်ဆာ နယ်ထဲမှာ အသေးစားစစ်အခြေစိုက် စခန်းထားဖို့လာစည်းရုံးသေးတာ သက်သေဘဲ ၊ ခွန်ဆာက သူရ စစ်မောင်တို့ ကြိုးစားမှု ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်တို့ အပေးအယူ တွေ ကြောင့် လက်နက်ချ လိုက်တော့ ပျက်သွားတယ် ၊ ဒါကြောင့် အကြံ ကြီးတဲ့ KIA တို့ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ထွက်လာမလား ကျဆုံးသွားမလား ဆိုတာ မကြာခင်သိရတော့မှာပါ။
သို့သော် တရုတ်၏ နယ်စပ် စည်းရိုးကိုအခိုင်အမာ တည်ဆောက်နေပုံက အမေရိကန်တွေ ရောက်လာမယ် ဆိုတာ ယုံမှားသံသယဖြစ်စရာ မလိုအောင် သက်သေဖြစ်လာပြီ။
Asia Pacific Research-
စ စ် ဘု ရ င်